Kitaabku waxa uu leeyahay in Ciise uu leeyahay timo gaaban? | Apg29
Inta badan ku tilmaamay Ciise timaha dheer leh, laakiin in ay si dhab ah oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah?
Sabuurad sida a fanaaniinta yar ka feker sida Ciise u eg.
Waxaan leeyahay ka akhriso wax badan oo online in Ciise uu leeyahay timo dheer ama gaaban. Waxa ay u muuqataa in arrintan ayaa u shaqeeya oo aad u badan, sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo qoraal ah oo arrintan ku saabsan.
"Waxaan dib ugu aan kuwa i iyo dhabannada i garaaceen kuwa ka baxay Gadhka siiyey. Wejigayga waan ceeb iyo candhuuf toona ma aan qarin "- Isaiah 50:. 6.
In filimada iyo sawirada Ciise muujinayaa timo dheer oo gadhku idiin la. In uu leeyahay gadhka ah la samayso Kitaabka Quduuska ah sababtoo ah waxa ay sheegay in ay "ka baxay Gadhka." Kanu waa Eraygii Kitaabka Quduuska ah haddii kale waa wax sii sheegidda a Ciise 'dhibaatada iyo la Wadho. Laakiin waxaa la qiyaasayo inuu timaha dheer lahaa?
Haddaba waxaa meel waa in Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan Ciise dhererka timaha laakiin waxaa jira Qorniinka oo muujinaya in Ciise uu leeyahay timo gaaban. Paul qoray in ay tahay ceeb ah nin timo dheer u leedahay.
Mise ma idinka barto dabiiciga in ay tahay ceeb ah ninku hadduu timo dheer uu leeyahay? - 1 Korintos. 11:14.
Nadiir Ilaah loo soocay
Laakiin waxaa jiray kuwii Nadiir Ilaah loo soocay in timaha dheer ku lahaa. Ahaa Nadiir Ilaah, tusaale ahaan, Simpson iyo Yooxanaa Baabtiisaha.
"Laakiin naagtii u muuqatay malaa'igtii Rabbiga oo ku yidhi iyada,". Bal eeg, waxaad tahay madhalays oo aan dhashay carruurta wax, laakiinse waad uuraysan doontaa oo waxaad dhali doontaa wiil [Simpson] Haddaba hubi in aad khamri ama wax lagu sakhraamo kuma ay cabbi oo ha cunin wax nijaas. waayo, bal eega, waad uuraysan doontaa oo waxaad dhali doontaa wiil, oo madaxiisana waxaa u saarnaa inaan mandiil la iman doonaan, waayo, wiilka uurka ka soo noqon doonaa Nadiir Ilaah. Waxa uu bilaabi doonaa gurmadka reer binu Israa'iil ka soo badbaadiyey gacantii reer Falastiin. " - Judges 13: 3-5
Waayo, isagu wuxuu [Yooxanaa Baabtiisaha] weyn Rabbiga hortiisa ku noqon doonaa. Khamrigu iyo sakhraamo wuu diiday inuu cabbo doonaan, iyo uuraysi, wuxuu isagu ka dhergi doonaa Ruuxa Quduuska ah. - Luke. 1:15.
ka timo dheer reebo lahaa Simpson ayaa sidoo kale todoba tidcin.
Dom 16:13: "Deliilaah Samsoon ku tidhi," Ilaa iyo hadda, waad i khiyaanaysay oo been ii. Anna hadda ii sheeg sida aad u xidhno, "wuxuu iyada ku yidhi:". Waa hagaag, haddii aad u tidicdo toddobadii raamood ee madaxayga la dunta si aad u maro "".
A Nadiir lahaa oo ay ku jiraan khamri ma la cabbo. Laakiin ma aha Ciise ee Nadiir maxaa yeelay, wuxuu ka cabtay khamri iyo sidaas ayaynu ku garanaynaa in uu timo dheer haysan.
"Wiilka Aadamow [Ciise] yimid, oo wuxuu cunaa oo la cabbaa, oo idinku waxaad odhan: Bal eeg, waa nin cir weyn oo khamriyacab ah oo saaxiib la ah cashuurqaadayaal iyo dembilayaal" - Luke 7:34
In aan search on shabaqa oo aan soo ogaaday a page oranaya in Ciise uu ahaa cut sida dadka Yuhuudda Orthodox maanta.
"Ha la gooyaa timaha on dhinacyada madaxa ama clip off cidhifyada jarin." (3 Mos 19.27)
In 3 Genesis, Ilaah wadaaddadii, iyo nin shaqsi ee bulshada ku amray sida ay u daryeeli doontaa gadhka iyo timaha. Sidaa darteed ayaa aaminsan in Ciise raacday this. Laakiin halkan waxaan qabaa badan waxaad ka akhrisan.
Waxay noqdeen sida noo aadanuhu
No, wuxuu eegay sida Yuhuudi waxaa meel mar. Oo isna wuxuu lahaa ma muuqaalka ridday. Waa dhab in Kitaabka Quduuska ah in uu "waxay noqdeen sida aadanaha" (Filiboy 2: 7).
... oo, markuu lahaa suuradda Ilaah, ma fiirsan sida maal bililiqeystey in Ilaah la mid ahaado, laakiin naftiisa u bixiyey, oo wuxuu qabsaday on addoon suuraddiis, oo wuxuu noqday sida noo aadanuhu. - Filiboy 2: 6-7.
Oo isna wuxuu lahaa muuqaal caadi ah, kaas oo aynu ku fahmi sidii Yuudas Khayaamo kii gacangeliyey dhunkasho sida calaamad u tahay in askartii ogaan lahaa Ciise oo ahaa in ay u guuri doonto.
Mat 26:48: gacangelin lahaa iyaga siiyey calaamad, oo wuxuu ku yidhi, "alla midkaan dhunkado, isagu waa ay jiraan, isaga qabato."
Inkasta oo Ciise u ekaa nin caadi ah, oo uu iftiimo ilaahnimadiisa kaas oo ay ku sameeyeen yaabaa hal mar.
"Oo isna wuxuu Hortoodana ayuu ku beddelmay, wejigiisu waa dhalaalayay sida qorraxda oo kale, oo uu dharkiisii ​​soo noqday sida nuurka oo kale." - Matthew 17: 2
Ciise ku tilmaamay
Waxaa jira hal meel ee Kitaabka Quduuska ah run ahaantii wuxuu qeexayaa Ciise, laakiin ma aha oo dhererkiisu. Tani waa markii Ciise sara kacay waxaa shaaca ka qaaday in Rasuul Yooxanaa on Batmos.
Oo madaxiisa iyo timihiisuna waxay u caddaayeen sida suuf cad iyo sida baraf cad, oo indhihiisuna waxay ahaayeen sida dab ololkiis. - Up 1:14.
Sidee baad u aqoonsan Ciise
Laakiin, ma aha Ciise aawadii oo dhererka timaha ka dhiga haddii aan aqoonsan Ciise ama ma. Waa gacmaha sårmärkta uu.
Tomas kuma odhan, "Waxaan Ciise, timo dheer arki doonaa, waxaan qabaa," laakiin "Haddii aanan heli si aad u aragto ku daabacayaa musmaarrada gacmihiisa iyo dhegi aanan fartayda gelin daabacayaa musmaarrada oo aanan gacantayda ku eekaan gelin dhinaciisa, waxaan u qabaa aan "(Yooxanaa 20:25).
Ku alla kii waxaa iska Ciise, muddo dheer-lehba ama gaaban-lehba, aad go'aan ka gaari kara haddii ay dhab ahaantii waa Ciise by si loo arko haddii uu leeyahay godad cidiyaha in uu gacmaha.
fredag 30 oktober 2020 12:28
Be för en före detta satanist att han visar empati till andra och nu kristen, tror inte att gåvan han har är från gud då han ser saker i bilder I huvudet som stämmer och inte stämmer,
Mikael W: Idag tillsätter man som man vill
Israelvänlig: Tänk på att det var en kristen kyrka som dådet i Nice skedde